Jumlada FEELM Waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Naqshadeynta IF 2020 2020 oo ah sumcad tiknoolaji atomisiyadeed oo casri ah. warshad iyo soosaarayaasha | SIGAAR
FEELM Waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Naqshadeynta Naqshadeynta ee 'IF Design Design 2020' oo ah nooca tiknoolajiyadda atomization ee cusub
Iyada oo arrimaha deegaanka ee sigaarka elektaroonigga ah ay soo kordhayaan walaacyo badan, waa war wanaagsan in shirkadaha wax soo saara qaarkood ay si dhab ah ugu qaadanayaan dhaqankooda. Sigaarka la tuuro ee E-sigaarka, oo ku guuleystay Abaalmarinta 2020 iF, waa shaqo ay qabatay FEELM, oo ah nooc tikniyoolajiyad atom atomis ah.
Wax soo saarka FEELM wuxuu soo bandhigayaa warqad cusub oo deegaanka ku habboon, taas oo hagaajinaysa nabaad-guurka heerka xaddiga 76% ee mugga marka la barbar dhigo kuwa caagga ah ee caadiga ah. Sidoo kale, naqshadeynta warqadaha duuban ee lakabyada badan waxaa lagu gartaa nadaafadda iyo howlaha bulshada. Lakabka dibedda ee afku isticmaalo waa la goyn karaa ka hor intaan loo gudbin 15-ka isticmaale ee soo socda. Naqshaddani waxay ilaalinaysaa caafimaadka shakhsiga waxayna fidisaa fikradda ilaalinta deegaanka iyadoo lala dhexgelayo dadka waaweyn ee sigaarka caba.
Abaalmarinta 'IF DESIGN AWARD' waa tartan caalami ah oo caan ah oo xagga wax soo saarka ah, baakadaha ah, naqshadaha ah, naqshadeynta adeegga, iwm. Markii ugu horreysay waxaa la siiyay 1953, waawaa shaabadda ugu da'da weyn ee madaxbanaan adduunka,calaamad u ah guulaha naqshadeynta ee muuqda ee diiradda saaraya awoodda hal-abuurnimo ee naqshadeynta.
FEELM waxay bixisaa tikniyoolajiyad kuleylineed oo casri ah oo loogu talagalay nidaamyada boodhka xiran. NJOY, RELX, HEXA, Haka, VAPO, Alfapod, iyo noocyo kale oo badan ayaa waxaa ku rakiban tikniyoolajiyadda FEELM. Qiyaasta iibka ee qeybaha leh FEELM gudaha waxay dhaaftay 1 bilyan.
Si la mid ah Vaporesso iyo CCELL, FEELMis waa qayb ganacsi oo madaxbannaan oo ka tirsan Shenzhen SMOORETechnology Limited., Oo ah shirkad hormuud u ah warshadaha uumiga. Waxaa jira in kabadan 400 oo khuburo ah SMOORE Research Institute, oo leh 1600 shatiyo caalami ah.
Sigaar kuleylka, E Sigaarka Uumiga Liibiya, Newport E Sigaar, Epen, Sigaar Cabbida, E Xidhmada Sigaarka Bacaha,